Teregiramu inovandudzwa zvakare nenhau | IPhone nhau
Teregiramu yave kwechinguva ikozvino mu kufarira mameseji chikuva kune vashandisi vazhinji nekutenda kune ese mabhenefiti ayo aanotipa tichienzanisa nechero imwewo application senge WhatsApp, Line, Viber ... Chikamu chemhosho, yekuchidaidza neimwe nzira, inowanikwa mune zvinogara zvichigadziriswa izvo iko kunogashira iko kushanda mwedzi wega wega. Ini ndinofunga kuti kubvira payakatangwa, hapasati pave nemwedzi umo Teregiramu isina kuwana gadziriso ichiwedzera mabasa matsva uye nekuvandudza zvakanyanya kushanda kweiri sevhisi, iyo nenzira ine zvikumbiro zveMac, PC, iPad ...
Teregiramu ichangobva kugamuchira nyowani nyowani, ichisvika vhezheni 3.8, uko Teregiramu inotipa iyo Bots 2.0. Idzo nyowani dzakabatanidzwa kiyibhodhi ine callback, mabhatani ekuvhura URL kana switch kune yakasanganiswa modhi inotibvumidza isu pindirana neyekushandisa mameseji mune imwe nzira yemvura. Iwo mabhoti matsva anogona kugadzirisa mameseji aripo pane iyo nhunzi nekudyidzana navo, pamwe nekutendera kutumira mhando dzese dzekubatanidza dzinotsigirwa neTeregiramu, senge mavhidhiyo, mimhanzi, zvitambi, mafaera ...
Kumabhoti atove kuwanikwa muTeregiramu senge @gif, @vid, @ imdb ... zvinotevera zvinowedzerwa: @music, @sticker, @youtube uye @foursquare. Asi sekunge dai idzi nhau dzaive shoma, iyo nyowani nyowani inotibvumidzawo kugovana mafoto nemavhidhiyo nekukurumidza nedzimwe Telegram chats kana mamwe mafomu, tarisa YouTube mavhidhiyo neiyo nyowani multimedia player, tumira zvitambi kubva mupaketi yekutarisa menyu usinga wedzere, tarisa iyo GIF. Izvo zvinotibvumidzawo kuti titarise mhedzisiro yemabhoti akabatanidzwa usati waatumira uye dhizaini yakagadziridzwa nebara rekufambira mberi uye magwaro matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Teregiramu inovandudzwa zvakare nenhau
Mhoro!! Kubva kuvandudzwa kweTeregiramu vhezheni 3.8 Ini handikwanise kuchengetedza iyo PDF neEPUB kurodha mumashandisirwo… iyo mamiriro achinja here? unogona kundiudza chimwe chinhu nezvazvo?
Mhoro Sergio, chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri. Ini ndinotora pasi pdf muteregiramu uye ipapo hapana nzira yekuivhura neBooks, semuenzaniso. Ndinovimba pane imwe nzira yatisina kuwana parizvino, nekuti zvikasadaro iyo yekuvandudza inoita senge nhanho yekudzokera kumashure!
Wepamusoro gumi weanonyanya kukurumidza mafoni eQ10 1 zvinoenderana neAnTuTu